Qarsoodinimada Xogta - Isbahaysiga Xuquuqda Soogalootiga Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > our Work > Asturnaanta Macluumaadka
Saxeex Codsiga! Xidhiidhka ka jar Shirkadaha Farsamada ee Ganacsiga ku leh ICE!
La dhajiyay: Abriil 27, 2022
Codso in Colorado ay jarto xiriirka LexisNexis, shirkad gaar ah oo ka iibinaysa xogtayada ICE!
Akhri Warbixinta Cusub Hadda: "Sabotaging Sanctuary: Soo Bandhigidda Ilaalinta ICE"
Warbixin cusub oo naxdin leh ayaa faahfaahinaysa sida ICE ay u isticmaalayso shirkadaha tignoolajiyada si ay uga gudubto sharciyada iyo siyaasadaha meesha quduuska ah.
Sabotaging Sanctuary: Warbixin Cusub
Warbixin naxdin leh oo cusub oo la sii daayay Abriil 2022 ayaa faahfaahinaysa sida Kastamyada Socdaalka iyo Dhaqangelinta (ICE) ay u isticmaalayaan dullaaliinta xogta iyo shirkadaha tignoolajiyada sida LexisNexis ee Colorado si ay u hareer maraan siyaasadaha iyo sharciyada quduuska ah. CIRC, iyadoo la kaashanaysa Mijente, Just Futures Law, iyo isbahaysi awood leh oo ururada maxaliga ah, ayaa sii daayay warbixinta taas oo daaha ka qaadaysa sida qandaraas qaran oo dhan $22.1 milyan uu u bixiyo macluumaadka shakhsiyeed ee boqolaal milyan oo qof oo ku nool Colorado - iyo dhammaan dalka oo dhan - ICE. .
Wax ku saabsan warbixinta ka akhri kan koowaad ee gaarka ah ee The Guardian
SB21-131 waa sharci ka jira Colorado
Sannadkii 2021, SB21-131 waxa saxeexay Guddoomiye Polis ka dib olole sannado badan socday oo ay hogaaminaysay CIRC's I Drive Coalition iyo Ololaha Qarsoonnimada Xogta ee Dhammaan. Sharcigani wuxuu xaqiijinayaa in dhammaan xogta shakhsi ahaaneed ee lagu aaminay gobolka Colorado aan lala wadaagi karin wakaaladaha ka baxsan sida ICE iyada oo aan la helin amar maxkamadeed. Tani waxay ka dhigan tahay in Coloradans ay hadda si ammaan ah u heli karaan shatiga darawalnimada iyo agabyada kale iyaga oo aan ka baqin in xogtooda loo isticmaalo iyaga.
Warbixintayada, oo la sii daayay Abriil 20, 2021 iyada oo qayb ka ah ololaha #NoTechforICE ee Mijente, waxay tusinaysaa sida ICE heshiis ula gashay shirkad xog-ilaaliye ah (Appriss Solutions, oo hoos timaada LexisNexis) si ay u hesho xogta ballan-qaadista nidaamka digniinta xabsiga Colorado ee loo yaqaan VINE, Kaas oo ay maamusho Sheriffs County ee Colorado. Waxa kale oo ay soo bandhigtay iska-horimaad muuqda oo […]
Maxay Muhiim u tahay Qarsoonaanta Xogtu?
Dhaqannada tarxiilka ee Maraykanka waxaa lagu beddelay xog weyn iyo ilaalin. Waaxda Amniga Gudaha (DHS) ayaa si isa soo taraysa ugu tiirsan xogta weyn iyo farsamada si ay u fuliso weerarrada iyo masaafurinta. Maadaama dawladaha, magaalooyinka, iyo shirkadaha tiknoolajiyadu ay soo ururinayaan xog aad iyo aad u badan oo ku saabsan dhammaanteen, DHS waxay raadineysay siyaabo ay ku heli karto oo u kaydin lahayd xogtayada shaqsiyeed oo ay ku heli lahayd farsamooyin cusub si loo helo shaqsiyaadka loona fuliyo xariggeeda iyo masaafurinta. Xogta laga helo shatiga baabuurka gobolka iyo waaxyada diiwaangelinta (DMVs) waa mid ka mid ah ilaha ugu waaweyn ee macluumaadka ay Socdaalka iyo Dhaqangelinta Kastamku (ICE) u adeegsadaan fulinta fulinta socdaalka.
Adduunyada ugu habboon, dawladda federaalku waxay dejin doontaa xeerar ku saabsan sida hay'adaha gaarka ah iyo kuwa guud ee qaranka loo oggolaaday inay ururiyaan, kaydiyaan, oo wadaagaan xogta. Si kastaba ha ahaatee, xaqiiqda hadda jirta ayaa ah in xogta shaqsiyeed ay ururinayso wakaaladaha maxalliga ah iyo kuwa gobolka iyo sidoo kale shirkado gaar loo leeyahay, hay'adaha federaalku waxay galaangal u leeyihiin xogta iyaga oo adeegsanaya kanaallo rasmi ah iyo kuwo aan rasmi ahayn. Sidaa darteed, dawladaha dawlad -goboleedku waxay leeyihiin kaalin muhiim ah si ay u soo galaan si loo hubiyo inaan xogta la ururin haddii aan loo baahnayn, aan lagu kaydin muddo ka badan inta loo baahan yahay, oo aan lala wadaagin hay'ad kasta iyada oo aan la helin waaran maxkamadeed. Thanks to SB-131, xogtayadu aad bay ugu dhowdahay in la ilaaliyo, laakiin waxaan ognahay inay weli jirto shaqo loo baahan yahay in la sameeyo.
Iyadoo SB-131 uu yahay guul muhiim ah, waxaan ognahay in ilaalinta dawladdu ay socoto iyo ICE iyo hay'adaha kale ee ugaadhsiga ay sii wadaan raadinta hababka looga faa'iidaysto xogtayada. Waxaa la joogaa waqtigii lala xisaabtami lahaa shirkadaha teknolojiyadda sida LexisNexis, Palantir, iyo BI Inc si ay u xoojiyaan oo ay xoojiyaan mashiinka masaafurinta ee kala fogeeya qoysaskeena iyo bulshooyinkayada, waxaana la joogaa waqtigii la xoojin lahaa sharciyada gobolka oo dhan si aan si wanaagsan u ilaalino dhammaan Coloradans, dhib malaha xaaladooda socdaalka.
No Tech for Ololaha ICE
Sidee ICE iyo DMV u Wadaagaan Macluumaadka
Kaliya Warbixinta Mustaqbalka
Macluumaadka Liisanka Darawalnimada Gobolka: Jebinta Wadaagista Xogta iyo Talooyinka Xogta Asturnaanta